Agụba usoro eriri laser
4S Series eriri laser
P usoro eriri laser
5M usoro eriri laser
QCW eriri laser
Na-agbakwunye fiber laser
Fiber laser ikuku jụrụ oyi
Welder laser ejiri aka
Ihe mkpuchi laser
Ọrụ zuru ụwa ọnụ
Akụkọ ihe mere eme nke GW
Ndị otu GW
GW niile laser ngwaahịa dabere na 976 nm mgbapụta technology, elu electro-optical akakabarede arụmọrụ, elu nchapụta elu ike otu modul imewe, budata mma na Laser ọnwụ, Laser ịgbado ọkụ, Laser mmako n'ichepụta na Laser elu ọgwụgwọ, wdg Pụrụ iche ọhụrụ obere ikuku mma. welder handheld, mfe ọrụ, 4X ngwa ngwa ọsọ, multi-arụ ọrụ data ngwugwu mbanye.
1000W kọmpat Single Mode CW Fiber Laser isi iyi
8000W elu ike multimode CW eriri laser isi iyi
1500W Ikuku mma fiber laser isi iyi
1000W Ikuku mma eriri laser isi iyi
3000W High Light Single Mode CW Fiber Laser isi iyi
SMATLas 4S usoro otu mode na-aga n'ihu fiber laser, yana teknụzụ mgbapụta 976nm, nrụpụta eletrọnịkị ngwa anya ruo 42%, imewe ihe owuwu ọhụụ ọhụrụ, ntinye ọnụ, nha pere mpe, dị mfe maka njikọta na mmezi, nhọrọ ọnụọgụ ọkụ ọtụtụ, 3000w otu ọnọdụ. mmepụta na 20μm eriri isi, ike njupụta ruo 24000KW / mm 2, M^ 2 <1.3, kwesịrị ekwesị ma ọ bụ igbutu na ngwa nke na-achọ elu ike njupụta.
2000W High Light Single Mode CW Fiber Laser isi iyi
5Q-030HQ 3000W QCW Quasi-na-aga n'ihu eriri laser isi iyi
SMATLas 5Q usoro quasi-na-aga n'ihu eriri laser nwere ike mmepụta dị elu, ike na-agbapụta elu, nke dabara adaba maka ike elu elu, ogologo uzuzu obosara, gburugburu ebe obibi oyi na-edozi, dị ka ịgbado ọkụ, eriri ịgbado ọkụ, ịkụ ọkụ, nkenke ịkpụ, wdg. ọ dị mfe Integrated na ala mmezi ọnụ ahịa tụnyere omenala YAG laser.
5Q-020HQ 2000W QCW Quasi-na-aga n'ihu eriri laser isi iyi
5Q-015HQ 1500W QCW Quasi-na-aga n'ihu eriri laser isi iyi
5Q-010HQ 1000W QCW Quasi-na-aga n'ihu eriri laser isi iyi
1000W elu ume pulsed eriri laser isi iyi
Na GW pụrụ iche niile-fiber modulation pulse na single mode high brightness technology, 4P single mode HB pulse fiber laser ọ bụghị naanị na-abawanye ike MAX ruo 10KW, MIN pulse obosara, 100ns, kamakwa hazie Gauss, HBF, D mode na ihe ndị ọzọ. ọnọdụ nhịahụ mmepụta na-agbanwe agbanwe maka ngwa ndị ọrụ chọrọ. Ka ọ dị ugbu a, hazie 4P usoro usu ugboro ugboro, obosara usu, ike kacha elu, nwekwara ahaziri akọwapụta ihe nrụpụta pụrụ iche maka ngwa dị iche iche chọrọ.
500W elu ume pulsed eriri laser isi iyi
200W elu ume pulsed eriri laser isi iyi
GW obere fiber laser handheld welder dabere na teknụzụ mgbapụta 976nm, akụrụngwa welder laser dị ugbu a n'ahịa bụ ihe ngwọta jụrụ oyi, ya bụ, a na-ewepụ okpomọkụ na laser site na mgbasa ozi dị n'èzí nke chiller. GW na-elekwasị anya na mkparịta ụka na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ na-adabere na nkà na ụzụ 976nm, jikọtara ya na elu fotoelectric ntụgharị arụmọrụ nke 976nm Creatively doziri nsogbu nke ikuku refrigeration ikike, malite na ikuku jụrụ 976nm technology maka oge mbụ na ụlọ ọrụ, dozie ike. oriri na portability okwu, na ọzọ na-edu teknuzu mmepe direction nke eriri lasers.
A1000W-welder ikuku jụrụ oyi fiber laser handheld welder
GW 3000W otu mode CW eriri laser modul
Dabere na teknụzụ mgbapụta 976nm, 3000W GW otu ọnọdụ CW fiber laser modul bụ ngwaahịa modul laser anyị tozuru oke. Enweghị ike ọkọnọ ACDC, enwere ike ijikọ ya maka isi iyi laser fiber multimode dị elu. Ejiri ọkwa IP 65 mechie ya. Ibu bụ naanị 20kg DYI laser isi iyi akụkụ, otu mode eriri laser akụkụ.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ GW Laser Technology LLC
2F, Ụlọ 5-3, 398 Shuanglian Road, Qingpu District, Shanghai China, 201702
© Nwebiisinka - 2021-2025 : Ikike niile echekwabara.